भारतका दुई राज्यमा प्रहरीबीच किन गोली हानाहान भयो ? | News Polar
न्यूजपोलार श्रावण १३, २०७८, बुधबार
नयाँदिल्ली । भारतमा दुई राज्यका प्रहरीबीच झडप हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ। पश्चिमोत्तर राज्यहरू आसाम र मिजोरमको सीमामा उक्त विरल घटना भएको हो।
मिजोरम र आसाम राज्यबीच १६४ किलोमिटर सीमा छ। सीमाङ्कनको विषयमा दुवै पक्षको आआफ्नै दाबी छ। ती दाबीलाई लिएर दुवै पक्ष प्रायः झगडा गरिरहन्छन् र कहिलेकाहीँ हिंसात्मक घटना पनि हुने गर्छ। तर दुई राज्यका प्रहरीबीच प्रत्यक्ष सङ्घर्ष भएको यो पहिलो घटना हो। भिडन्तमा मारिनेमा आसामका प्रहरी छन्।
सन् १९९४ देखि नै सङ्घीय सरकारले दुई राज्यबीच सहमतिका लागि मध्यस्थता गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। सोमवार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरी सीमा विवादबारे सौहार्दपूर्ण समाधान खोजी शान्तिको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ।
औपनिवेशिक कालमा लुशाई हिल्स नामले मिजोरम चिनिन्थ्यो। त्यतिबेला मिजोरम आसाममै पर्थ्यो। भारत स्वतन्त्र भएको करिब तीन दशकपछि सन् १९७२ मा मिजोरमले मान्यता पायो जब त्यो सङ्घीय सरकार(प्रशासित क्षेत्र बन्यो।
सन् १९८७ मा मिजोरमले पूर्ण रूपमा एउटा राज्यको मान्यता पायो। आसामका तीन जिल्लाको सिमाना मिजोरमकै तीनवटा नै जिल्लासँग जोडिएको छ।
वनजङ्गल भएको क्षेत्रका धेरै बिन्दुमा विवाद छन् अनि दुवै राज्यले एकअर्कामाथि भूमि अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
आसाम र मिजोरमका बासिन्दाबीच सातामा दुई पटक झडप भएपछि सन् २०२० को अक्टोबरमा अभूतपूर्व तहमा तनाव चर्कियो।
त्यस बेला दुवै तर्फका आक्रोशित बासिन्दाले टहरा तथा साना पसलमा आगजनी गरे। घटनामा कम्तीमा आठ जना घाइते भएका थिए।
घटनाको केन्द्रमा रहेको एउटा कदमअन्तर्गत एउटा सीमावर्ती विवादित क्षेत्रबाट असम राज्यले मानिसहरूलाई हटायो।
अधिकारीहरूले सो क्षेत्रमा रहेको एउटा फार्महाउसका साथै बालीनाली पनि जलाएको बताइएको थियो।
मिजोरम राज्य सरकारले त्यसको जबाफमा असमले आफ्नो दाबी गर्दै आएका केही क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्‍यो।
तनाव मत्थर पार्न सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप नगरुन्जेल दुवै राज्यका बासिन्दाले राजमार्गहरू बन्द गर्दा करिब तीन सातासम्म यातायात अवरुद्ध रह्यो।
यसपालि के भएको हो ?
स्थानीय रिपोर्टहरूका अनुसार एउटा विवादित सीमाबिन्दु लैलापुरमा दुवै राज्यका प्रहरीबाट झडप भएको हो।
आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिस्व सरमाले संवैधानिक परिधिको रक्षा क्रममा मिजोरमको फौजबाट आफ्नो राज्यका प्रहरीहरू मारिएको ट्विटरमार्फत् जानकारी गराए। तर मिजोरमका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
मिजोरमका गृहमन्त्री लालचाम्लिआनाले आसामका प्रहरी अधिकारीहरू सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्सद्वारा सञ्चालित एउटा पोस्टमा बलपूर्वक प्रवेश गरेपछि जबाफी कारबाहीस्वरूप गोली चलाएको बताएका छन्।
सङ्घीय सरकारले विवादित नाकामा सीआरपीएफलाई 'तटस्थ फौज'को रूपमा परिचालन गरेको छ। (बीबीसी)
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८, १४:३४:३९